Ngingumfana amazwi isiqiniseko eziningi lethu liye lezwa ezifana elawula ukushaya kwenhliziyo, ukufakwa umshini wokulawula ukushaya kwenhliziyo, nezinye ezifanayo. Yebo, alikho igama elithi, cha, kodwa ekuphileni kwansuku zonke asetshenziswa futhi, cishe, kakade-ke Akusiyo imfihlo ukuthi kukhona abantu abanale umshini wokulawula ukushaya kwenhliziyo kubalulekile. Kodwa lokhu kungenzeka khona ulwazi nokwazisa kwethu siphele. Ngakho kuyini ngempela 'pacemaker "? Iziphi izinguquko empilweni yomuntu ngemva kokumiswa umshini wokulawula ukushaya kwenhliziyo?
Phakathi izimpawu ukufakwa pacemaker ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana imisiwe kakhulu noma kwenzeke ngokuphazima kweso eyeka umsebenzi inhliziyo. Ibonisa i ukufakwa pacemaker kanye ezithile izinhlobo ukushaya kwenhliziyo, engewona nokho amenable ekwelashweni ezivamile. I izinkomba esiyinhloko ukufakwa we pacemaker ezilandelayo: ukuvinjelwa noma, ngamanye amazwi, izinhlobo ezahlukene conduction neziyaluyalu, izinhlobo ezahlukene kwenhliziyo (njalo, esindayo, hhayi amenable emithini yokuselapha), kanye, kwezinye izimo, inhliziyo ukwehluleka.
Pacemaker ngokwawo idivaysi encane, eyakhiwa izingxenye ezintathu: umthombo kagesi, generator ishayela kanye electrode izintambo. EX Ubukhulu kunalokho nesizotha njengoba isisindo sayo (40-200 amagremu). pacemaker uqobo yakhelwe ozofakwa nezicubu ongama isiguli: esiswini, ngakwesokunene noma ngakwesobunxele subclavian izindawo.
Ngenxa yokuthi bambalwa kakhulu abantu bazi lukhulu pacemaker, emhlabeni idivayisi kukhona izinganekwane eziningana.
Mhlawumbe iqiniso kakhulu, abangenangqondo kakhulu inganekwane ukuthi pacemaker - into impilo alien futhi elimazayo. Thanda, ke nephazamisa ukuphila, kungaholela edabukisayo. Lena edukisayo. De isimo empeleni waba endaweni impande ezahlukene. Izizathu ezisobala ukufakwa elingenalo iwashi lenhliziyo. EX ezingaphezu kuka besidinga for iziguli, ikakhulukazi kulabo abaphethwe bradyarrhythmia, okungaholela ukulahleka ezingalindelekile ukwazi. Stimulator, esikhundleni salokho, aqede isigqi ezingavamile futhi izimpawu zaso.
Okunye izinganekwane mayelana pacemaker kungenzeka zifake phakathi isitatimende ukuthi, bathi, iziguli ezinemishini elawula ukushaya kwenhliziyo ukuba wesabe zasendlini kanye nezintambo zikagesi, njengoba amagagasi kagesi wukukhanya kubo kungathinta ukusebenza kwe-stimulator. Kule ndaba, kufanele kuphawulwe ukuthi iziguli umshini wokulawula ukushaya kwenhliziyo iphephile ngokuphelele ukuthola ibanga 15 cm kusuka kunoma iyiphi zikagesi zasendlini. Ngokuqondene ephezulu voltage izintambo zikagesi, bese ezidlula phansi izintambo, abantu pacemaker kufanele nje beseduze okuthunyelwe, ukugwema sisondelene izintambo ngokwabo.
Kodwa abanye abantu abangcwele uqinisekile ne pacemaker, isimiso, awukwazi ukusebenzisa omakhalekhukhwini. Kuyinto - futhi iyadida. Isiguli nge umshini wokulawula ukushaya kwenhliziyo nje umane ugcine ifoni yakho endaweni okuphambene indawo lapho isethiwe ECS futhi, ngokufanelekile, khuluma, bamba ifoni ngase okuphambene kusukela indlebe umfutho. Kalula nje, uma ivuselela ngakwesobunxele, bese ubamba ifoni kwesokudla - futhi okuphambene nalokho.
Phakathi kwezinye izinganekwane evamile ehambisana ukufakwa we pacemaker, kungenzeka ukuba uqaphele ukwesaba kokuthi ukusebenza ukufaka umshini wokulawula ukushaya kwenhliziyo abe nomthelela omubi impilo ivolumu, zikwenza umzimba, isimo sibe sibi izinga lempilo nokunye. Futhi lokhu futhi inganekwane. Ezimweni ezinjalo eyaziwayo abantu rheonome esungulwe hhayi kuphela namanje kuholele yokuphila asebenzayo, kodwa uyabandakanyeka ngempumelelo kwezinye lezemidlalo. Into wukuthi zonke stimulator olulodwa - Uhlelo ayo umsebenzi, okuyinto kukhethwe ngokuvumelana nezici umzimba futhi ukuphila kwesiguli. Ngamafuphi nje, owesifazane owayenomopho pacemaker angabakhulula, abadlali - ukuqeqesha, kanye nabo bonke abanye - nje baphile ukuphila okuvamile!
Ukuphathwa ngempumelelo ukulunywa omiyane: Highlights
A izindlela ezimbalwa ezilula yokwelula izicathulo eyenziwe lesikhumba yokufakelwa ekhaya